Mobiles kacha mma nwere ezigbo igwefoto - Septemba 2021 | Androidsis
Mobiles nwere igwefoto kacha mma
Otu uru dị ukwuu nke ọbịbịa nke akpọrọ smartphones bụ nke mere ka anyị hapụ ohere n’oghere na akpa anyị. Anyị agaghịzị ebu ngwaọrụ iji kpọọ oku, ngwaọrụ ọzọ iji ruo ebe anyị na-aga, ngwaọrụ ọzọ ịge egwu ... Ekwentị amaka niile bụ otu, ma n'ezie, ọ bụkwa igwefoto.
Kemgbe ọtụtụ afọ ese foto esepụwo ọtụtụ; Site na ikike nke ndị kachasị purists (na ndị ọkachamara) ọ fọrọ nke nta ka ha dabaa igwefoto SLR maka ọrụ ọkachamara. Ugbu a, anyị nwere ike iji foto anyị dị mma were were foto anyị dị iche iche mee ka anya dị iche iche dị mkpa dị ka Leica ma ọ bụ Sony, agbanyeghị, ọ bụghị igwe foto niile dị na ekwentị niile bụ otu ihe kpatara ya taa ka anyị ji ewetara gị nhọrọ nke mobiles nwere igwefoto kacha mma.
1 Ekwentị 6 nwere igwefoto kachasị mma taa
1.1 Samsung Galaxy S8 na S8 +
1.2 Google Pixel na Pixel XL
1.5 Na-asọpụrụ 9
2 Akụkụ dị mkpa mgbe ị na-ahọrọ ekwentị maka igwefoto gị
2.1 More megapixels anaghị abụkarị otu ya na ogo dị elu
Ekwentị 6 nwere igwefoto kachasị mma taa
Ozugbo anyị nyochachara ụfọdụ akụkụ bụ isi nke anyị kwesịrị ịdebe mgbe anyị na-ahọrọ smartphone maka igwefoto ya, ma mgbe anyị chụsịrị akụkọ ifo nke megapixels, ka anyị hụ ihe ha bụ. mobiles nwere igwefoto kacha mma Site na ahịa.
Samsung Galaxy S8 na S8 +
Ugbu a, Samsung Galaxy S8 A na-ahụta ya ama nke nwere igwefoto kachasị mma n'ahịa. Dị ka ọgbọ gara aga, ọ na-ejikọta ihe teknụzụ duo-pixel enwe ike ilekwasị anya n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'otu ntabi anya na ọnọdụ ndị na-enwu gbaa Otú ọ dị, oge a ka Samsung mepụtara ihe mmetụta ahụ, ọ bụghị site na Sony.
Ọ nwere a uchu agha f / 1.7 (You chetara ihe anyị kwuru tupu imepe?) Na ọnọdụ ọkụ dị ala ọ dịkwa ike ilekwasị anya ngwa ngwa ma weghara ọkụ karịa igwefoto ọ bụla na ekwentị ọzọ.
The Galaxy S8 na S8 + na-enye a mode ntuziaka ekele nke anyị nwere ike ịhazigharị ikpughe, nghọta ISO ma ọ bụ nguzo ọcha. Na mgbakwunye, ọ nwekwara ike ịdekọ vidiyo na mkpebi 4K, na ngwa ngwa ma ọ bụ ngwa ngwa na ọtụtụ ndị ọzọ.
Google Pixel na Pixel XL
Ọzọ nke mobiles na igwefoto kacha mma na ahịa ugbu a bụ usoro Google pixel y Google Pixel XL, na nke a n'agbanyeghị na ha bụ smartphones malitere na 2016 ma ga-agbanwe n'oge na-adịghị anya.
Isi ihe mmetụta bụ 12,3 megapixels na usoro 4: 3 nwere pikselụ nha nke 1,55 µm ma maka oghere nke oghere, nke a bụ f / 2.0 (obere oghere karịa Galaxy S8) yabụ ọ na - ewe ntakịrị ọkụ.
Akụkụ ọzọ na-adọrọ mmasị bụ na ọ nwere kọmputa stabilizer kama ijikwa ngwa anya, yabụ na ị ga-enwerịrị obere oge, ọ bụghị nke ukwuu mgbe ị na-edekọ vidiyo ka ị na-ese foto.
Mana anyị na-ekwusi ike, a na-ewere igwefoto Pixel na Pixel XL dị ka otu kachasị mma.
Ikekwe dịka ị nwere ike iche n'echiche, ndị LG G6 A na-ewerekwa ya dị ka otu n'ime ekwentị nwere igwefoto kachasị mma taa, ma nke a bụ n'ihi ya abụọ 13 megapixel isi ese fotoOtu n’ime ha nwere oghere f / 1.8, oghere 71º na ngwa mgbatị anya, nke ọzọ nwere oghere f / 2.4 buru ibu nke nwere ike iwe foto 125º karịa nke igwefoto ọ bụla ọzọ.
Na mgbakwunye, o nwekwara mode ntuziaka na ihe ndị ọkachamara ọkachamara ga - ahụ n'anya: ịnwere ike chekwaa foto gị na usoro RAW. Anyị enweghị ike ichefu mbugharị ngwa anya nke ndị ọrụ kọwapụtara dịka ọ dị ezigbo mma.
Sony anya m mgbe niile guzo n'ihi na ha mma, n'ihi ya, ọ kwesịrị ịbụ ihe ijuanya ịhụ na nke a nhọrọ na Sony Xperia XZ ya na igwefoto ya 23 megapixels (n'agbanyeghi na mbu ikwuru na onu ogugu ndi omeiwu abughi ihe kachasi mkpa) na a autofocus dị oke egwu ngwa ngwa. Ọ bụ igwefoto na-enye foto na nghọta doro anya na nkọwapụta dị ịtụnanya.
Ọzọkwa kwesịrị ịrịba ama na ọnụnọ nke a ihe mmetụta ìhè gburugburu nke na-edozi ogo okpomọkụ ma na-agbazi nguzo ọcha n'ụzọ dị mma karị.
Dị ka Pixels, ebe a ka anyị hụkwara kọmputa oyiyi stabilizer, dị nnọọ mma maka vidiyo.
Ọ bụ ezie na ọ bụ otu n’ime ọkọlọtọ kachasị ọhụrụ iji mee ka ọ pụta, Honor 9 bụ otu n’ime ekwentị nwere igwefoto kachasị mma n’oge ahụ.
O nwere ime ụlọ okpukpu abụọ nke nwere a 20 MP monochrome sensor na otu 12 MP RGB sensor na mbugharị ngwakọ. The ụlọ ọrụ ana achi achi na abụọ ese foto ịghọta onye ọ bụla n'ụzọ zuru okè, na-enye oké nkenke na nkọwa, ọtụtụ ihe ndị ọzọ doro anya na agba na oyiyi ka 200% chawapụrụọbụlagodi mgbe ọnọdụ ọkụ anaghị adị mma, na ihe a niile maka "teknụzụ nhọrọ pixel pụrụ iche". Na mgbakwunye, ọ na-etinyekwa a 3D panoramic mode na a mode esereseHa abụọ dị egwu.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịchọpụta nkọwa niile nke ọdụ ụgbọ a, anyị na-akpọ gị ka ị kpọtụrụ nyocha a zuru ezu ya na nkọwa ya niile, ọnụ ahịa na nnweta.
Ọzọ n'ime ekwentị ndị kacha adịbeghị anya kamakwa otu n'ime ekwentị ndị nwere igwefoto kachasị mma bụ OnePlus 5. Esemokwu ewezuga ọdịdị ya na ekwentị ụfọdụ na-asọ mpi, OnePlus 5 na-eburu igwefoto igwefoto abụọ na autofocus site na nchọpụta oge. Otu n’ime ha bụ megapixels 16 nwere oghere f / 1.7 ebe nke abụọ bụ megapixels iri abụọ nwere oghere f / 20. Yabụ, ọ nwere ike ịse foto dị oke egwu, yana agba na-enwu gbaa ma dị egwu, ọ dịkwa ike ịdekọ vidiyo na mkpebi 2.6p na 2160 fps.
Ruo ugbu a, nhọrọ anyị nke mobiles nwere igwefoto kachasị mma. O doro anya na anyị ga-efu ụfọdụ n'ihi na, ka emechara, ọ bụ nhọrọ. Na mgbakwunye, ụdị ọhụụ na - apụta mgbe niile na - enye igwefoto dị mma ma dị mma karịa enwere ike anyị ga - alaghachi n'oge na - adịghị anya iji melite ndepụta a. N'agbanyeghị nke ahụ, cheta na ihe dị mkpa bụ ịhụ akụkụ dị iche iche dịka ndị anyị kwuru na mbido na karịa ihe niile, họta ekwentị ga-egboro gị mkpa gị.
Akụkụ dị mkpa mgbe ị na-ahọrọ ekwentị maka igwefoto gị
Mgbe ị na-ahọrọ ekwentị mkpanaaka ọhụrụ iji dochie ọdụ ochie anyị, enwere ọtụtụ akụkụ nke anyị kwesiri iburu n'uche. O doro anya, ihe ka ọtụtụ n'ime anyị ga-ejedebe site na mmefu ego anyị, agbanyeghị, ozugbo anyị matara ebe anyị ga-aga, ọ dị mma inyocha n'ụzọ zuru ezu dị ka ihe dị mkpa dị ka nha ihuenyo na ogo, na ike na arụmọrụ ekwentị, ohere nchekwa dị n'ime na anyị ga-achọ (ọkachasị iche maka ngwa, ka ịghara ịda mkpụmkpụ), ike batrị na ndi mmadu na n'ezie, igwefoto ka dị na ogo foto ị nwere ike ịse na vidiyo ị nwere ike idekọ.
Mgbe ọ bụla anyị wetara gị nhọrọ nke ekwentị mkpanaaka na Androidsis, n'agbanyeghị ọnụahịa anyị na-ekwu maka ya, anyị na-ekwusi ike na isi ihe dị mkpa: ekwentị kachasị mma ekwesịghị ịbụ nke kachasị ọnụ, ọ bụghị otu ụdị ewu ewu, ama kachasị mma bụ nke kacha mma na-egbo mkpa onwe onye na atụmanya nke onye ọrụ ọ bụla.
Yabụ, ọ bụrụ na ụwa nke ịse foto masịrị gị, ma ọ bụ n'ọkwa ọkachamara ma ọ bụ ọkwa onye na-amu amu, ọ na-atọ gị ụtọ ịnakwere oge kachasị mma nke ndụ na ịmepụta ihe pụrụ iche pụrụ iche, nke mbụ, ihe ịtụnanya na nke dị elu, ị kwesịrị ịkwụ ileba anya na njirimara igwefoto ekwentị. Anyị atụworị anya na, oge a, mgbanwe a agaghị adị ọnụ ala. Dị ka ọ dị na ngalaba igwefoto SLR, a na-ahụ igwefoto kachasị mma na ekwentị mkpanaaka kachasị ọnụ, ọ bụ ezie na nke kachasị mma nwere ike ọ gaghị abụrịrị onye na-etinye ekwentị dị oke ọnụ.
More megapixels anaghị abụkarị otu ya na ogo dị elu
Ruo ogologo oge, na ikekwe maka ahịa, a tụrụ ogo nke igwefoto ekwentị mkpanaaka site na nọmba megapixels (karịa MP, ogo dị elu). Isi a jidere n'etiti ndị ọrụ ruo n'ókè nke na ọbụna taa ọtụtụ ndị na-anọgide na-adabere na ya nhọrọ ha, agbanyeghị, eziokwu bụ na igwefoto kachasị mma ekwesịghị ịbụ nke nwere ọtụtụ megapixels. N'ezie, ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke megapixels na-ezo aka na mkpebi kachasị elu. N'ezie, mgbe anyị na-ekwu maka obere ihe mmetụta, ọnụ ọgụgụ dị elu nwere ike bụrụ ihe megidere ya n'ihi na ọtụtụ pikselụ nọ n'otu oghere, ha ga-adị obere ma yabụ, ha ga-ewe obere ọkụ. Na nke ya, obere ọkụ a ga-eme ka ụba mkpọtụ, ya bụ, n'ọnọdụ onyonyo ka njọ. Ya mere, omume na-adịbeghị anya bụ pexels pere mpe, mana ibu.
Usoro elekwasị anya na ngwa anya bụ ihe ọzọ dị mkpa mgbe ị na-achọpụta igwe nwere igwefoto kachasị mma.
Ọtụtụ ndị nrụpụta ahọrọla itinye ihe a ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke anya m na ekwentị ha n'ihi na nke a ị nwere ike belata ma ọ bụ zere ntụgharị. Na metụtara ìhè (dị ka mgbe anyị na-ekwu okwu banyere pikselụ), na oghere hiwere ụzọ buru ibu ọ ga-ekwe ka a ukwuu ego nke ọkụ kụrụ ihe mmetụta. Na nke a, anyị ekwesịghị ichefu na mgbe anyị na-ekwu maka oghere gbadoro ụkwụ, ọnụọgụ pere mpe na-egosi oghere ka ukwuu, dịka ọmụmaatụ, f / 1.7 na-enye ohere ohere ma ọ bụ ngabiga nke ìhè karịa f / 2.2.
Banyere usoro elekwasị anya, ndị autofocus ngwa ngwa ọ ga - eme ihe dị iche na ijide ọnọdụ ma ọ bụ nke na - agbanahụ anyị.
Obi abụọ adịghị ya na igwe eji igwefoto kachasị mma ga-elekọta ihe dị iche iche na akụkụ dị ka isi dị ka elekwasị anya, mkpebi, nha nke ihe mmetụta ma ọ bụ ihe mmetụta, nke kachasị mma, wdg, n'agbanyeghị, kwa ezigbo ngwanrọ dị mkpa maka nhazi ihe oyiyi kachasị mma. N'ezie, enweghị ndị ọkachamara foto ole na ole na-etinye sọftụwia ahụ mkpa karịa igwefoto nke ekwentị n'ihi na ọ na-akwado ma na-akpali onye okike ihe okike, na-enye ohere ụdị agbapụ dị iche iche, wdg.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles nwere igwefoto kacha mma
Miguel Angel Villasante Rodriguez dijo
Aha ahu kwesiri ibu MILILE KWESIRI CAMERAS Kachasị mma na ANDROID ..... enweghị ele mmadụ anya n’ihu m chere
Zaghachi Miguel Angel Villasante Rodriguez
You hụla aha blọọgụ ahụ?
Na-agbanwe Ulises German Soto dijo
Zaghachi iji chụpụ Ulises German Soto
ma ụgha, ka ọ dị ugbu a ekwentị nke igwefoto kachasị mma bụ htc u11 ...
The post abụghị ọbụna xperia xz ptemium
Site n'aka Samsung rutere Spain, DeX Dock nke na-eme ka Galaxy S8 gị bụrụ kọmputa
Na-achọ ezigbo ekwentị maka ihe na-erughị euro 300? Echefula ahia a na Honor 8